Dr. Ben Carson: Qiso guul leh | isbeddel
← Cool War: The Future of Global Competition…a new book by Noah Feldman
Xuseen Bulxan iyo Frantz Fanon →
Dr. Ben Carson: Qiso guul leh
Horraantii sannadkan ayuu mar keli ah sida dayaxa uga soo dhex mudhay malaayiinta ku nool dalka Maraykanka. Ma aha uun maskax-qaleenka dunida ugu wanaagsan…waxa uu xanbaarsan yahay mid ka mid ah sheekooyinka shakhsiga ah ee dunida ugu macaan.
Hooyadii: gabadh madow oo 13 jir ah oo ku nool mid ka mid ah gobollada ugu cunsiyaradda badan Maraykanka. Xilligu waa 1951; qof kasta oo madow oo dalkaas ku nool waxa u taalla hawl culus. Waa halgan lagu kala dooranayo nolol iyo geeri. Aabbihii waxa uu ka mid yahay inta dooratay geerida. Waxa uu dhalay 24 carruur ah, quudkiisu na waa khamrada iyo xashiishadda. Inantan madow ee aan waxba baran ee 13 jirka ahi markii ay Benjamin Carson iyo walaalkii dhashay duqa khamriilaha ahi duurka ayuu iska xulay. Iyana guntiga ayay dhiisha iskaga dhigtay. Saddex shaqo oo kala danbeeya ayay maalintii geli jirtay. Dadka ladan ee cadcad ayay guryaha u nadiifin jirtay. Mararka qaarkood, marka ay shaqo weydo, kaniisadda ayay quruskooda ka qaadan jireen. Ben waxa uu ahaa Dhakaake…maya ee waxa loogu sheegay in uu yahay Dhakaake. Hooyadii se weligii waxa ay u sheegi jirtay in aanay jirin cid isaga ka maskax badani. Isaga iyo walaalkii…iyo xitaa qof kasta oo madow. Cid cid kale ka maskax badani ma jirto. Waa adiga cidda waxa ugu badan isyeeli kara ama waxa ugu badan isku tari karaa. Haa. Sidaa ayay mar kasta ugu sheegi jirtay.
Dugsiga uu dhigto waxa looga yaqaanna Dhakaake, ma jiro cid ka dhibco hoosaysaa. Caddaanka dugsiga wax ka dhigaana waxa ay ciyaalka cadcad u sheegaan in duulka madow loo abuuray in ay iyaga u shaqeeyaan. Bal eega Ben/Dhakaake ayay ku qanciyaan. Isna sidaas ayuu u qaayibay. Sidaas fudud. In uu yahay addoon Ilaahay u abuuray in uu caddaanka u shaqeeyo. In ay khalad tahay in uu wax barto..wax fahmo..wax u fiisado. Dhakaake waa Dhakaake. Muxuu baran karaa waabu madow yahay eh.
Inantii madoobayd ee Dhakaake hooyada u ahayd waxa ay Dhakaake iyo walaalkii ku soo rogtay wax waalli u eg. Toddobaadkii laba barnaamij oo keli ah ayaa TV-ga laga daawanaya. Laba ay iyadu u xushay. Inta kale buugaag ayaa la akhriyayaa. What? Are you crazy! Sug. Weliba toddobaad kasta laba buug ayaa la soo dhammaynayaa isla markaana iyaga oo waxii ku duugnaa la soo koobay ayaa qoraal la iigu soo gudbinayaa. Oh my God! Inantan madoobi ma taqaanno marmarsiinyo. Waxa keli ah ee ay aamminsan tahay waa in qof wal oo nooli lee yahay maskax uu wax wal oo dunida jira ku jiidhi karo. Ma jirto wax maskaxda bani aadanka horjoogsan karaa. Sidaa darteed warka ay u sheegtay waa sidaa ay u sheegtay.
Inta ay inanta madoobi nadiifinta guryaha caddaanka ku maqan tahay, Dhakaake iyo walaalkii waa in ay maktabadda guud ee magaalada ku qaataan. Toddobaadkiina mid walba laba buug soo akhriyaa isla markaana qoraal ku soo gudbiyaa. Waa ay u saxdaa ama iska dhigtaa wax u saxaya…meelo ayay calaamadisaa ama iska dhigtaa wax calaamadinaya oo dhibco ayaa ay siisaa. Iyagu ma ay garan hooyadood in ay wax akhrido iyo in kale…waayo uma ay oggolaan in ay ogaadaan akhris iyo qoraal la’aanteeda. Sannad keli ah ka dib waa kan Dhakaake:
– Hooyo.. buugga iska dhig oo kaalay wax cun.
-Hooyo I sug meel macaan ayaa marayaaye.
-Hooyo! waxa aan doonayaa in aan noqdo dhakhtar.
-Wax wal ba waa aad noqon kartaa!
Sannadkaa Dhakaake waxa uu ka soo hinqaday ardayga ugu liita fasalka oo waxa uu ku biiray dhowrka arday ee ugu fiican fasalka. Baraarugga ardayda iyo bareyaashu waxa uu yimid maalintii baraha Juquraafigu weydiiyay fasalka dhagax uu gacanta ku hayay oo aanay ardaydu xilligaa gaadhin cilmigiisa. Markii cid ka jawaabta la waayay ayuu Dhakaake si deggen gacanta u taagay. Markii baraha oo qoslayaa jawaabta u oggolaaday na waxa dhacay wax aan la filayn. Dhakaake waxa uu sheegay magaca dhagaxa waxa na uu sharxay sida uu u samaysmo iyo xilliyada uu samaysmo. Dharaartaa waxii ka danbeeyey Dhakaake waxa uu soo ceshaday magaciisii oo loo soo gaabiyey Ben. Waxa uu noqday ardaygii ugu wacnaa dugsiga markii la qalinjabiyey, waxaanu deeq waxbarasho ka helay jaamicadda Yale oo uu Psychology ka qaatay. Hayaankiisa halkaas ayuu ka sii waday ilaa uu noqday maskax-qaleenka dunida ugu fiican iyo agaasimaha guud ee Johns Hopkins Hospital—mid ka mid ah Hosbitaallada dunida ugu wacan, waxa la siiyay billadda ugu sarraysa ee qof rayid ah ay siiso dawladda Maraykanku, Presidential Medal of Freedom.
Haddaba Dr. Ben Carson sannadkan waxa lagu martiqaaday qofka ugu mudan xafladda lagu qabto guriga cad ee Maraykanka ee loo yaqaan National Prayer Breakfast. Hadal qaayo leh ayuu ka jeediyay. Waxa uu dhaliyey doodda ugu cusub uguna adag Maraykanka dhexdiisa lixdii bilood ee u danbeeyey. Waxa uu ka hadlay siyaasadda caafimaadka ee maamulka Obama, waxbarashada iyo arrimaha qoyska Maraykanka. Guji lingaxan oo daawo khudbaddiisa: http://www.youtube.com/watch?v=83IiLN_EaF4
Dr. Ben waxa uu leeyahay dhowr buug oo uu ka mid yahay Gifted Hands oo markii danbe filim laga dhigay. Waxa uu kaga sheekaynayaa noloshiisa iyo sidii uu ku noqday qofkii u horreeyey ee kala jara mataano madaxa iskaga dhegsan sannadkii 1986. Haddaad wakhti hesho daawo filimka: http://www.youtube.com/watch?v=uFvRWiFV4N0
Posted by Warfaa on Juunyo 21, 2013 in Uncategorized